नेपाली | HRJC
ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर (एचआरजेसी) ले नेपालमा यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या र यौन हिंसा जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनको पीडितहरूको न्यायको पहुँचलाई सुदृढ गर्छ ।
वि. स. २०५२ देखि २०६३ सम्म नेपालले शशस्त्र द्वन्द भोग्नुपर्यो । त्यसकाल खण्डमा दुवै पक्षबाट यातना, यौनजन्य हिंसा, जबरजस्ती बेपत्ता पारिने र स्वेच्छाचारी हत्या लगायतका कयौं संख्यामा मानव अधिकार हननका घटनाहरू भए । द्वन्द समप्त भएको एक दसक बितिसक्दा पनि पिडितहरूलाई न्यायमा पहुँचका लागी ज्यादै कठिनाई परिरहेको छ ।
द्वन्दको समाप्तिपश्चात पनि स्वेच्छाचारी हत्या, यातना जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अझैपनि घटिरहेका छन्। यहाँ पनि, लामो र जटिल न्यायिक प्रक्रियाहरू, कारावाही गर्न अधिकारीहरूको अनिच्छ्या र न्यायको लागि भएका निकायहरूबारे जानकारीको कमीका कारणहरूबाट पिडितहरू न्याय खोज्न निरुत्साहित हुन्छन। केहि भने आवाज उठाउँदा थप खतरामा पो परिने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।
ह्युमन राईट्स र जस्टिस सेन्टरको स्थापना यसका संस्थ्गत साझेदारहरूबिना सम्भव थिएन। हामी खासगरी नेपालस्थित बेलायती वैदेशिक एवं कमनवेल्थ कार्यालयहरु, जर्मन राजदुतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना पिडितहरूका लागी भोलूंटरी कोषप्रति आभारी छ। साथै हामी युरोपियन युनियन, मिसेरियर र क्यान्टन अफ जेनेभाप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
त्यसका अलावा पीडितहरुलाई न्यायिक प्रणालीको निटक पुर्याउन उनीलाई सवल बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण काम हो, जसका लागि एचआरजेसी पीडितहरुको लागि सवलीकरण कार्यशालाहरु आयोजना गर्ने गर्दछ, ता कि उनीहरुले आफ्नो अधिकारको बारेमा अझ बढी बुझ्न सकुन् र ती प्रक्रियाहरुमा थप संलग्न हुन सकुन् ।
ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर र यसको साझेदारी संस्था ट्रायल इन्टरनेसनलले यौन हिंसासँग सम्बन्धित नेपालको कानुनहरुको विस्तृत विश्लेषण बुझाएका छन् । कागजमा प्रगती विवरणहरु उल्लेख गरेतापनि व्यवहारमा उपयुक्त मापदण्डहरु कार्यान्वयन गरिएको पाईदैन । यी संस्थाहरुले यो...
रिपोर्ट तथा तथ्य पुस्तिकाहरु
[तथ्य पुस्तिका] मानव अधिकार समितिको फैसला कार्यन्वयनको अवस्था २०२१
[प्रतिवेदन] महिला विरुद्धको हिंसाका विशेष प्रतिवेदक समक्ष प्रस्तुत गरेको विषयगत प्रतिवेदन
[तथ्य पुष्तिका] यातना सम्बन्धी नेपाललाई लागु हुने कानुनहरु
मानव अधिकार समितिको फैसलाहरु कार्यन्वयनको स्थिती
[संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती] नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न असफल:दण्डहीनता कायमै
[संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती] नेपाल बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूद्वारा देशका पीडित/प्रभावितहरूको न्याय प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइको अन्त्यका लागि आह्वान
सलिना काफ्ले नेपालको मानव अधिकार वकिल हुन्। उनी ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरसंग सन् २०१८ मा मानव अधिकार अधिकृतको रुपमा जोडिएकी थिईन्। यसमा आबद्ध हुनुअघी उनले महिला, शान्ति र सुरक्षा; लैंगिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरणमा थुप्रै काम गर्नुका साथै नेपालमा सुशासन र कानुनी शासनका अनुसन्धानमा आबद्ध थिईन्। उनले थुप्रा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गैर सरकारी संस्थाहरूसंग कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेको अनुभव समेत छ। उनले राष्ट्रिय जर्नलहरूमा मानव अधिकारसंग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा थुप्रै लेख प्रकाशित गरेकी छिन् ।
सलिनाले काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानुनमा स्नाकोतर अध्धयन गरेकी छिन्।
म पिडितको न्यायको पहुँचलाई हरेक तवरले सबलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर मार्फत मेरा कार्यहरू त्यसप्रति समर्पित गर्न प्रतिबद्ध छु।
कपिल अर्याल हाल काठमाडौँ स्कूल अफ लमा सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले सन् २००० मा व्यवसायी वकीलको रुपमा र सन् २००५ मा कानुन विषय प्राध्यापनबाट आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरु गर्नुभयो। उहाँको कानुन, मानव अधिकार, फौजदारी न्याय, लैंगिक न्याय, असक्तता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, बालअधिकार, मानव बेचबिखन/ ओसारपसार विरुद्ध र साक्षीको सुरक्षाका विषयहरूमा काम गर्नुभएको १९ वर्ष भन्दा बढी भैसक्यो। उहाँले नेपालमा स्वच्छ पुर्पक्षका मापदण्डहरू, बालबालिकाको हकाधिकारहरू र मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा वृहत अनुसन्धानहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रिया र संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धि निकायहरूको प्रतिबेदनका लागी थुप्रै नागरिक समाज संगठनका लागि परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नुभएको छ।
प्रवीण सुबेदी सबै तहका न्यायिक निकायमा अभ्यास गर्ने अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।उहाँलेनर्वेको अस्लो विश्वविद्यालयबाट सूचना तथा संचार प्रबिधि कानुनमा स्नाकोत्तर गर्नुभएको छ। उहाँले देवानी, फौजदारी तथा व्यापारिक कानुनी विषयमा विभिन्न अदालतहरूमा कानुनी प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ र विभिन्न विषयहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ। उहाँ काठमाडौँ स्कुल अफ लको शिक्षण संकायमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा नियमित प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि नेतृत्वको कार्यक्रममा फेलो प्रतिनिधिको रुपमा चुनिनु भएको थियो। उहाँले हंगकंग विश्वविद्यालयको मिडिया कानुन फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ कानुनी आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्नुका साथ साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतसमक्ष सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू पेश गरी बहस गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। साथै उहाँ प्यारामाउन्ट लिगल एडभाईजरी सर्भिसेस प्राईभेट लिमिटेडको सहयोग प्रबन्धक र साझेदार पनि हुनुहुन्छ।
उहाँले देवानी, फौजदारी तथा व्यापारिक कानुनी विषयमा विभिन्न अदालतहरूमा कानुनी प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ र विभिन्न विषयहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ।
निराजन थपलिया नेपालमा कार्यरत एक मानव अधिकार व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू – ट्रायल इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल सेन्टर फर ट्रानजीसनल जस्टिस (आई सी टी जे ) मा – करिब १३ वर्ष विभिन्न पदमा रही कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँ हाल एमनेस्टी इन्टरनेसनलको निर्देशकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले मानवीय र सामाजिक विज्ञानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ।
अंकित बाबु अधिकारी
अंकित बाबु अधिकारी एक अनुसन्धान व्यवसायी र पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ हाल विकास क्षेत्रमा अनुसन्धान, अनुगमन र मुल्यांकनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँ फाउन्डेसन फर लिगल म्यानेजमेन्टमा मुल्यांकन, अनुगमन र शिक्षण संयोजनकर्ताको क्षमतामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ वाशिंगटन पोष्टको लागि पनि लेख्नुहुन्छ। २०१४ र २०१५ को बीचमा अंकितले ट्रायल इन्टरनेसनलमा मानव अधिकार र संचार अधिकृतको क्षमतामा रही कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँले द काठमान्डू पोष्ट (रिपोर्टर) र द हिमालयन टाइम्स (डेस्क सम्पादक) लगायतका राष्ट्रिय दैनिकहरूसंग काम गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विकास शिक्षामा एम फिल को अध्ययन गर्दै हुनुहुन्। उहाँले सोही विश्वविद्यालयबाट दिगो विकासमा स्नाकोत्तर पनि गर्नुभएको छ। उहाँ एक कलाकार हुनुहुन्छ र नेपाली संगीत जगतमा गायक र संगीतकर्ताको रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ।
“न्याय प्राप्तीबाट मात्रै मैले आफ्नो संघर्ष अन्त्य भएको महसूस गर्नेछु। यसले जे भएको थियो त्यसलाई मेटाउने छैन तर मेरो गरिमा फिर्ता ल्याउने छ। “
अमलिना (pseudonym), यातना पीडित
कपिल अर्याल, अध्यक्ष, एचआरजेसी
“ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरमा दिईएको तालिमले मलाई मेरो क्षेत्रमा निरन्तर हुने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानार्कषण गर्न मार्गदर्शन गरेको छ। म यसको लागी ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरको आभारी छु। “
राम विकास चौधरी, मानव अधिकार रक्षक
“मलाई म संयुक्त राष्ट्रसंघ अघि आफू जस्तै थुप्रै पिडितहरूको आवाज भएको महसुस गरेकी छु र म कानुनी सहयोगको लागी ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
पायल, द्वन्दकालिन यौनहिंसा पिडित
“ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरले तालिमहरू मार्फत दिएको ज्ञानले मेरो बुझाई मात्र बढाएको छैन कि यसले मलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पिडितहरूको उन्नत प्रतिनिधित्व गर्न सशक्तिकरण गरेको छ।”
हरि नारायण चौधरी, वकिल
के यहाँ नेपालमा दण्डहीनता विरुद्ध लड्ने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुनुहुन्छ ? हामी साझेदारीका लागी अवसरहरू छलफल गर्न हामी खुसी व्यक्त गर्छौं।